देवेन्द्र पौडेल - स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
२०७६ जेठ २४ शुक्रबार १८:३३:००
पूर्वएमालेका नेताले ओली-प्रचण्डको ‘भद्र सहमति’लाई ‘कथित समझदारी’को उपमा दिँदै पार्टीले अपनत्व ग्रहण नगर्ने बताइरहँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भिन्न विचार दृष्टिकोण राखेका छन् । उनले ओली-प्रचण्डको सहमति नै नेकपा बन्ने आधार भएको बताउँदै दायाँबायाँ गर्न, तन्काउन र आफूखुसी व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ- पौडेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :-
हामी लोकतान्त्रिक दुनियाँमा छौँ । एक्काइसौँ शताब्दीको चेतना छ । मनमा लागेका कुरा आ-आफ्नो विवेकद्वारा मुखरित गर्न पनि पाउँछन् । तर, प्रश्न के हो भने नेताहरूबीचको सहमति मान्दैनौँ भने केलाई मान्छौँ ? कसलाई मान्छौँ ?
त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने हो भने जनताले हामीसँग विकास माग्दैनन्, ऐन माग्छन् । कानुन माग्छन् । विधि फेर भन्छन् । तर, अहिले त जनताले सांसदसँग विकास माग्छन् । धारो, कुवा, पुलपुलेसा बना भन्छन् । सबैभन्दा बढी योजना नै सांसदसँग ठोक्किन्छन् । यसर्थ प्रणाली नबदल्ने आदर्शको कुरामात्रै गरेर हुँदैन ।